AKHRI WARAAQO CADAYNAYA MUSUQ MAASUQA BAAHSAN EE DUL HOGANAYA SHIR GUDOONKA GOLAHA WAKIILADA IYO SHARCI JABINTA AY SAMEEYEEN | Hangool News
AKHRI WARAAQO CADAYNAYA MUSUQ MAASUQA BAAHSAN EE DUL HOGANAYA SHIR GUDOONKA GOLAHA WAKIILADA IYO SHARCI JABINTA AY SAMEEYEEN
Hangoolnews:–Shir gudoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa dul hoganaya fadeexado musuq maasuq oo iyo ku tumasho awoodeed kuwaasi oo iskugu jira hanta lunsi iyo meel marsiga shaqaalaynta golaha wakiilada,
Halkan ka akhri nuqulo cadaymo ah oo ay heshay shabakada hangoolnews oo ay is dhaafsadeen shir gudoonka golaha wakiilada iyo haayada shaqaalaha dawlada,
Codsi Shaqaale Ku Meel gaadha “Gudoomiye Ciro 26/01/2016
Codsi Shaqaale Cusub Gudoomiye Ciro 28/12/2016
Jagooyinka Banaan Tartan iyo Imtixaan baa Loo marayaa “Gudoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha” 05/03/2016
Hay’adda shaqaalahu kama masuul aha shaqaalaysiinta shaqaalaha golaha ”Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha wakiilada 03/03/2016
Hay’adda shaqaalaha ayaa ka masuula shaqaalaysiinta iyo shaqaalaha Dawlada sida uu uu dhigaayo Xeer No 07/96 05/03/2016
INANKAYGA WARSAME BAASHE FAARAX IMTIXAAN LAGAMA QAADI KARO Baashe Maxamed Faarax Gudoomiye kixgeenka koobaad golaha wakiilada
Waraaqahan waxay ka mid yihiin waraaqo ay is dhaafsadeen Hay’adda shaqaalaha iyo Golaha wakiiladu, labada warqadood ee u horeeya waxaa uu Gudoomiye CIRO u qorya Hay’adda shaqaalaha taasoo uu kaga codsanaayo in loo shaqaalaysiiyo 10 shaqaale ah.
Warqada saddexaad ee xaga hoose idiinka muuqata Gudoomiayaha Hay’adda shaqaalahu waxa uu ugu soo jawaabaay in jagooyinka bannaan loo maraayo tartan iyo imtixaan sida uu sharcigu sheegaayo.
Warqada Afraad Gudoomiye ku xigeenka Golaha wakiiladu waxa uu jawaab u soo qoray Gudoomiyaha Hay’aada shaqaalaha taasoo uu ku sheegaayo in uu Golahu u madax banaanyahay shaqaalaysiinta shaqaalahiisa,
taasoo macnaheedu tahay in aan loo baahnayn in imtixaan laga qaado.
Sidoo kale waxa sida aad ku aragtaan warqada koobad ku jira ee calaamada khadka cass aan marsan yahay uu yahay magaca wiil uu dhalay Gudoomiye Baashe Faarax uu ka mid ahaa dhalinyaradan laga shaqaalaaysiinaayey Golaha wakiilada iyada oo sidoo kale warar xog ogaal ahi ay Hangool u xaqiijiyeen in labo ka mid ah tobankan shaqaale ay ka mid yihiin qayska gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland.
Halkan waxaad ku aragtaan Gudoomiyahii golaha wakiiladu wuxuu laba warqadood u qoray laba bilood gudahood Hay’adda shaqaalaha taasoo uu kaga codsanaayo in shaqaale loo shaqaalaysiiyo, halka Gudoomiye Ku xigeenka koowaadna uu leeyahay maaha shaqadiina hadaad tihiin Hay’adda shaqaalaha.
Dhanka kale waxaad ku arkaysaa is maandhaafka aqooneed ee u dhaxeeya shirgudoonkii Golaha wakiilada isla markaan ay wada isticmaalayaan hal warqad oo uu dusha kaga xardhan yahay Magaca Golaha wakiiladu.
Warqadee qaldan ma ta ka codsanaysa in Hay’aada shaqaalahu u shaqaalaysiisio shaqaale , Mise warqada leh shaqadiina maaha.
Intaas ka dib Hangoolnews Baadhitaan ay samaysay waxa ay heshay nuquladii waraaqihii ay is dhaafsanayeen waxaana cadaatay In Gudoomiye ku xigeenka koowaad uu doonaayo in uu sifo sharci darro ah ku shaqaalaysiiyo wiil uu dhalay isla markaana aanu marna ogolayn in Imtixaan laga qaado lana sinaado shaqadoonka kale , wiilkaas waxaa magaciisa la yiraahdaa sida ku cad warqadan halkan ku lifaaqan Warsame Baashe Faarax.
Xogaha kale ee Hangoolnews Heshay ayaa tibaaxaya in Shaqaalaha Golaha wakiiladu waxay kor u dhaafeen 116 kuwaasoo aan la garananyn waxa ay kala qabtaan, waxaa kaloo baadhitaanku cadeeyey in dhawrkii sanno ee u danbeeyey ay qaateen shaqaale ku dhaw 40 shaqaale oo aan soo marinHay’adda shaqaalaha aadna loogu tuhunsanyahay in ay caaglayaal yihiin oo aanaanay jirinba.
HAlkan ka Fiiri Waraaqaha Is kala duwan ee ay shir gudoonka iyo Haayada shaqaalahu is dhaafsadeen
Warqadaha shir gudoonka iyo hayada shaqaalah
Warqadaha haayada shaqaalaha iyo shir gudoonka